ကစားသမားအားလုံး ပုန်ကန်ကြမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ကွင်းပိတ်ကစားမယ့် အစီအစဉ် | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
ကစားသမားအားလုံး ပုန်ကန်ကြမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ကွင်းပိတ်ကစားမယ့် အစီအစဉ်
Covid-19 နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပရီးမီးယားလိဂ် တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ဒုတိယ အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စတင်နေပါပြီ။ အဲဒါကတော့ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကို ပရိသတ်တွေမပါပဲ ကွင်းပိတ်ကစားစေဖို့ပါ။ သူတို့က ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့်ကနေ တစ်ဆင့် ကလပ်အသင်းတွေ ဝင်ငွေပြန်လည်ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကစားသမားတွေကတော့ အဲဒီ အစီအစဉ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းဆန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိအစီအစဉ်အရတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားတွေကို အိမ်ထဲကနေ အပြင်မထွက်ပဲ နောက်ထပ် (၆)ပတ်လောက် နေခိုင်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိနေပြီး မတ်လ (၁)ရက်နေ့မှာတော့ ဘောလုံးပွဲတွေကို ကွင်းပိတ်ကစားပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်လည်စတင်ဖို့ ရှိနေတာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း ကစားသမားတွေဖက်ကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသရွေ့ ဘောလုံး ပြန်ကစားပေးဖို့ အစီအစဉ်မရှိပဲ ဖြစ်နေကြကြောင်း Mirror သတင်းစာရဲ့ အင်တာဗျူးတွေက ဖော်ပြနေကြပါတယ်။
ပရိသတ််မပါပဲ ကွင်းပိတ်ကစားမယ့် အစီအစဉ်ကို ကစားသမားအားလုံးနီးပါးက ဆန့်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေလည်း လုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားမှာပါ။
ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေခဲ့ပေမယ့်လည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှု မြင့်တက်လာတာကြောင့် မနေ့က နောက်ဆုံးအဖြစ် ပြုလုပ်ကာ ရပ်နားလိုက်ပါပြီ။
Manchester United will continue to pay all casual matchday staff even if the rest of the #PremierLeague season is cancelled or played behind closed doors.
More: https://t.co/LmDLJb6lOJ pic.twitter.com/oqiOPXdrqT
ပရီးမီီးယားလိဂ်အနေနဲ့တော့ ဘောလုံးပွဲတွေ ဆက်မကစားနိုင်တော့ပဲ ဘောလုံးရာသီကို အဆုံးသတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် ရုပ်သံလွှင့်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို လျော်ကြေးငွေတွေ ပေးရတော့မှာပါ။
ကစားသမားတွေဖက်ကတော့ ဒီအချက် (၄)ချက်ကြောင့် တံခါးပိတ်ကစားမယ့် ပွဲစဉ်တွေကို ငြင်းဆန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
(၁)။ အစိုးရက တရားဝင်သတိပေးမှုတွေ ပြုလုပ်ထားတာတောင် အရဲစွန့်ပြီး ကစားကြရမှာဖြစ်လို့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်နေကြတယ်။
(၂)။ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေကိုလည်း သူတို့ဆီကနေ ကူးစက်ခံရမှာကို ကြောက်နေကြတယ်။
(၃)။ တကယ်လို့ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ဖက် ဒါမှမဟုတ် အသင်းဖော်တွေဟာ ရောဂါကူးစက်ထားသူ တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်နေမှာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်။
(၄)။ ပရိသတ်မပါတဲ့ ကွင်းထဲမှာ ဘောလုံးကစားရတာဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိသလို ဖြစ်နေကြတယ်။
Rio Ferdinand says the Premier League season should be voided, even if that means denying Liverpoolafirst title in 30 years.
Do you think the league should be cancelled?#premierleague #liverpool #rioferdinand pic.twitter.com/EDTKZdxTOQ
— Soccer Beamz (@SoccerBeamz) March 23, 2020
အဲဒီ အချက်တွေကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမားများ အဖွဲ့ချုပ်ကနေ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာဖြစ်ပြီး ကစားသမားတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေမှာ ဘောလုံးကစားခြင်းမပြုနိုင်ဘူးလို့ အသိပေးထားတာပါ။
တကယ်လို့သာ ဘောလုံးသမားတွေကလည်း ကွင်းပိတ်ကစားဖို့ ငြင်းမယ််၊ တစ်ဖက်မှာလည်း ဗိုင်းရပ်စ်က ဆက်ပြီး ပျံ့နှံ့နေဦးမယ်ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးရာသီဟာ ကျိန်းသေပေါက် ဖျက်သိမ်းလိုက်ရမှာပါပဲ။
အဲဒီလိုဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ် တာဝန်ရှိသူတွေဟာလည်း လျော်ကြေးငွေတွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ ကြေကွဲရတော့မှာပါပဲ…။
Premier Leagueကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)